Hiasa eny amin’ny ambaratonga fototra : mpampianatra 2 943 nahazo ny mari-pahaizana CAE | NewsMada
Hiasa eny amin’ny ambaratonga fototra : mpampianatra 2 943 nahazo ny mari-pahaizana CAE
Tsapa fa nidina ny fari-pahaizan’ny mpianatra eny ambaratonga fototra indrindra ho an’ny taranja fototra. Hamerina ny kalitaon’ny fampianarana omena ny mpampianatra vao nahazo ny CAE.
« 2 943 ireo mpampianatra nahazo ny mari-pahaizana certificat d’aptitude à l’enseignement primaire (CAE/P) taona 2016, araka ny vokatra nivoaka omaly, tamin’ny fomba ofisialy », hoy ny talen’ny fanabeazana fototra, Ramahazosoa Irrish Parker, omaly, teny Anosy. Hampianatra eny anivon’ny ambaratonga fototra izy ireo. Azo jerena any amin’ny Cisco, Dren ary eny amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, Anosy, ny lisitr’ireo afaka rehetra. Voarakitra ao amin’ny pejy facebook-n’ny minisitera koa izany lisitra izany.
82 ireo tsy afaka tamin’ny adina am-bava rehefa tafita amin’ny adina an-tsoratra. Mbola afaka mamerina misoratra anarana hifaninana indray izy 82 ireo. Hotanterahina ny 29-30 aogositra ny adina an-tsoratra momba ny fahazoana ny CAE taona 2017. Natokana ho an’ny olona manana ny mari-pahaizana BEPC ary efa nampianatra telo taona ny fahazoana mifaninana amin’ny CAE. Tamin’ny taon-dasa no naverina indray ny fifaninanana hahazoana ity diplaoma ity rehefa nitsahatra nanomboka ny taona 1991. Nahatratra 52 ny foibem-panadinana nandray ny adina an-tsoratra tamin’izany. “Nanomboka ny volana janoary ka hatramin’ny volana mey lasa teo ny adina am-bava teny anivon’ny Cisco 114. Izay no nahaela ny fivoahan’ny valin’ny finaninanana”, araka ny fanazavana azo.
Ho an’ny CAP, hivoaka ny 28 jolay izao ny valim-panadinana taona 2016. Natokana ho an’ny olona manana ny mari-pahaizana bakalorea kosa ny CAP fa hampianatra eny anivon’ny ambaratonga fototra ihany koa izy ireo.